Rosia: Mampiseho ny ratra lalina navelan’ny adin’i Tsetsenia ny namonoana an’i Yuri Budanov · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Jona 2011 5:00 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, polski, Français, English
Namerina indray ny fifampihenjanana ara-poko na an-tserasera na ivelan'ny serasera ny namonoan'ny sasany an'i Yuri Budanov kolonely taloha tamin'ny tafika Rosiana izay noampangaina ho namona vehivavy Tsetsenina 18 taona nandritra ny Ady Tsetsenina Faharoa tamin'ny 10 jona 2011, ary nanamafy ny fahadisoam-panantenana satria mbola manjaka ny tsy fanarahan-dalàna ao amin'ny firenena.
Ilay mpanao gazety miasa ao Moskoa Miriam Elder no nivaofy fa ny raharaha Budanov no “tranga naningana noresahina be indrindra tam-pitsarana nisongadina avy amin'ny adin'i Tsetsenia, raha noampangaina ho nanao fihoaram-pahefana mndika ny zon'olombelona ny tafika Rosiana nandritra ny fiezahan'izy ireo handresy ny fikomian'ny mpioko.” Ity eto ambany ity ny fehin-teniny:
[…] Budanov dia noampangaina tamin'ny 2003 ho namono an'i Heda Kungayeva, vehivavy Tsetsenina 18-taona. Nidrikina izy fa mpioko kinga amin'ny fitifirana ratovovavy io raha azony hohadihadiana tami'ny 2000. Ny fanadihadiana santatra moa no nahitana fa nisy ny fampijaliana sy ny fanolanana.
Nivadibadika tokoa ny fandehan'ity tantara ity, sady miovaova hatrany ny fomba filazana ny fitoriana. Izy no iray amin'ireo vitsy dia vitsy amin'ny miaramila Rosiana notsaraina noho ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona ary maro ny tsikera no nilaza fa ny fifantohana be tamin'ity raharahany ity no nahafahan'ny fitondrana nanary teny antenantenan-dalana famotorana maro hafa. Noafahana nialoha ny fotoana tamin'ny 2009, rehefa nahatontosa ny sivy taona tamin'ny 10 nanamelohana azy hifonja, izay niteraka fanoherana tany Tsetsenia. Nefa ho an'ny mpikatroka nasionalista Rosiana dia natsangana ho toy ny olo-mahery i Budanov.
Raha noheverina ho firesaka malaza i Budanov eo imason'ny nasionalista Rosiana nandritra ny taompolo farany, dia iadian-kevitra any amin'ny ankolafy ideolojika rehetra sy ao amin'ny tontolom-bolongana Rosiana kosa ny fahafatesany.
Mitady ny meloka
Fandevenana an'i Yuri Budanov, sary Oleg Kashin amin'ny Twitpic
Vantany vao nisy ny famonoana dia maro tamin'ny bilaogera no nanondro ny Filoha Tsetsenina Ramzan Kadyrov ho mety ho ambadik'ity raharaha ity.
Alexey Navalny, Rosiana mpikatroka amin'ny fanoherana ny kolikoly, ary fantatra ihany koa amin'ny fijoroany no nasionalista, no nanoratra izao [ru]:
[…] Betsaka ny antony mampino fa ny famonoana azy dia nomanin'andian-jiolahy mivantana na ankolaka ka ny anaran'izy ireo ankehitriny moa dia hoe “governemantan'i Repoblika Tsetsenina.”
Farafaharatsiny, [Ramzan] Kadyrov dia efa nanao fanambarana ampahibemaso ny fikasany hanatontosa izany famonoana izany: “ho hitantsika ny fotoana hahafahantsika manao aminy izay mendrika azy [ru].” […]
Bilaogera efa2007, nitondra fanazavana mivelabelatra kokoa [ru]:
Ny iray mendrika saziana dia ny iray izay nanao ny fomba rehetra azony natao mba hahatonga izao toe-draharaha izao hitranga, mba hahatonga ny ady hirona hatrany hatrany amin'ny adim-poko, ilay iray izay mipetraka eo antampon'ny fananganana mijaridina naorin'ny tenany, milalao olona ho tahaka ny vato amin'ny fanorom-bazaha. Samy takalon'aina ao daholoisika na Rosiana na Tsetsenina, sivily sy miaramila, jiolahy na tsy manantsiny, ahanton'ireo jiolahy izay manamboninahitry ny KGB taloha izay mihazona ny firenena ireo – izao ihany ny fomba tokana itondrany ny olona, tsy mahay fomba hafa ry zareo, ary tena ilain-dry zareo ny fomba fisafidifidin'ny Fitsarana mba hampatahotra ny rehetra.
Ny filazana tadiaina ho ofisialy milaza fa ny nasionalista no mety ho namono an'i Budanov – izay ataon-dry zareo ho karazana olomanga – dia tsipahin'ny mpamaham-bolongana Rosiana tsy misy anavahana.
Iza no Tsimatimanota?
Tahaka ny amin'ny fitantarana an'ady hafa moa dia mibahan-toerana amin'ny adihevitra raha tokony horaisina ho olomanga i Budanov na olo-meloka an'ady.
Ny fanontanian'ilay mpamaham-bolongantsary aleshru – “Lazao ahy azafady, nahoana i Budanov no heverina ho olomanga? Tena te-hahalala aho” – moa dia nahazoana setriny manakaiky ny 420. Ankoatra ny fanamarinana mahazatra fa i Budanov dia namono an'i Kungayeva noho ny nieritreretany fa mpitifitra io, ny Bilaogera max_kozhevnikov no nanoratra [ru] ny toko iray nahafahan'i Budanov namonjy miaramila 160 (noesorina taminy moa ny valisoa azony noho io asa nataoy io rehetra hita fa meloka tamin'ny famonoana an'i Kungayeva izy).
Hafa noho izany kosa moa ny fomba fijerin'ny Tsetsenina an'i Budanov. Vainakh's Veras, Vondrona Kaokaziana Tavaratra Vkontakte.ru manana mpikambana 8000, dia nampiasa [ru] izao fiteny manaraka izao hamehezana izay nitranga tamin'ny 10 Jona:
Budanov no famantarana ny herisetra any Tsetsenia, famantaran'ny famoretana sy ny fangejana an'i Tsetsenia! Eny, tsy misy dikany izy fa 0,00001 isanjato amin'izay mendrika hovaliana faty noho ny fandripahan'olona natao tany Tsetsenia. Saingy ny fahafatesany dia fandresena[y] ideolojika manoloana ny Tafika Rosiana mpamono olona iray manontolo! ANIO NY FAHATSAPANA HO TSIMATIMANOTA EO AMIN'NY MIARAMILA ROSIANA NO VOAVONO! Tsarovy izany ry Kaokazy!
Ny nasionalista Rosiana kosa etsy ankilan'izany dia mino fa ny mpisintaka Tsetsenina no mizaka ny maha-tsimatimanota. Mpamaham-bolongana Nasionalista kon-budennogo no manoratra [ru]:
Ny olana amin'ny fitondran'i Putin dia ny tahaka an'i Budanov, Ulman, Arakcheyev [Eduard Ulman sy Sergei Arakcheyev koa dia meloka no nanao heloka nandritra ny ady] ihany no tsaraina. Mandritra izany fotoana izany, raha tsy mankasitraka ny didim-pitsarana ny ankolafy izay anirahan'ny fitondrana azy ireo hiadiana, dia vonoiny ireny. Aiza ny fitsarana ireo jiolahy izay nitazona andevo Rosiana tay Tsetsenia? Nandeha toeran-kafa angaha ireny? […] Aiza ny fitsarana ireo namono ny zokiolona Rosiana? Ary ireo nanao takalon'aina? Eto amin'ny firenentsika dia tsy azo sainina akory ny hisian'ny fitsarana tahaka izany.
utnapishtim2008 no milaza ny heviny [ru] momba izay mety ho mpamono olona an'ady any amin'ny andaniny Tsetsenina:
Maro izy ireo, saingy raha vao tapitra ny fanagadrana azy ireny – dia afahan'ny mpitsara ao an-toerana ry zareo, dia misy mamono avy eo dia izay.
Ao amin'ny lahatsoratra lava dia lava momba ny heloka an'ady, ny foko ary ny hajan'ny manamboninahitra ny mpisera LJ colonelcassad no mamarana [ru]:
Tsotra ny hevitro – Afaka nihoatra ny fahatsapana hamaly faty ny razambentsika, ary dia tahaka izany ihany koa isika. Tsy mila valifaty isika. Ny fahabangan'ny fanasaziana tsy azo ialana avy amin'ny fitondrana no mahatonga ny hiakiaka valifaty eny antsefatsefany eny ho fitaovam-pitsarana.